Shiinaha xardhay guddi-YA204 saarayaasha iyo shirkado | Yingjiwei
Noocyada aluminium xardhan
3. Waxaa looga baaraandegi karaa qaabab murugsan sida naqshadaynta
Aluminium xardhan oo aluminium ah ayaa lagu farsameeyaa dalool kala duwan ama qaabab kala duwan oo ku yaal taarikada aluminium ee mashiinka xardho. Iyada oo loo marayo farsamaynta xardho, taarikada aluminium ee fidsan ayaa si joogto ah loogu sii dheereyn karaa dareenka booska waxayna leeyihiin shaqooyinka gudbinta iftiinka iyo hawo-qaadashada. Isbeddelada iyo isboortiyo ka mid ah kuwa ku xeel dheer bannaanka daaweynta gaarka ah, kana dhigaya khadka inuu sii noolaado oo xarrago yeesho. Si ka duwan fikradda moodeelka dhaqameed, waxay ku habboon tahay naadiyo kala duwan oo casri ah, qurxinta guriga iyo xafiisyada.
Aluminium xardhan oo Aluminium ah ayaa loo qaddarin karaa inay yihiin saxan aluminium oo bannaan, waa la gooyn karaa oo lagu xardhi karaa godka oo leh dhumucdiisuna tahay 10.0mm, iyo isku dheellitirka waxqabadka ayaa adeegsanaya mashiinka CNC. Badanaa waxaa loo isticmaalaa qalab kala duwan, waa hab ku habboon habka wax loo gooyo precisioin sare oo badan, qaab ballaaran iyo qaabab gaar ah. Aluminium aluminium waxaa lagu xardhi karaa xirmooyinka aluminium ee aan caadiga ahayn ee cabbirka iyo qaabka kala duwan sida loogu talagalay naqshadeynta macaamiisha. Waana lagu been abuuri karaa qaabab kala duwan sida saqafka, darbiga daahyada, safka iyo wixii la mid ah.
Magaca badeecada Aluminium xardhan
Shayga No. YA204
Dhumucdiisuna 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 4.0mm / 5.0mm
Xiga: Xulka Honeycomb YB101